စုပ်ချက်ကြမ်းကြမ်း မဲဆောက် | ဒီရေ
ကျနော်သူနှင့်လူချင်းမတွေ့ဖြစ်ကြသည်မှာ…. ဆယ်နှစ်ခန့်ပင်ရှိပြီ။ သူက …မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်ကော် သိမ်ဆိပ့်ဘက်က ဖြစ်သည်။ သူ့အသားအရည်က ဖြူဖြူ…. အလုံးအထည်က သေးသေးညှပ်ညှပ်ပင်…။ ပအို့၊ မြန်မာကပြားဟု ထင်ရသည်။ ဆံပင်အားတိုတိုညှပ်ထားသဖြင့် သူ၏ လေးထောင့် ကျကျ မျက်နှာက ပို၍ပေါ်နေသည်။ ထိုင်းလယ်သမား အင်္ကျီ ညိုညိုပြာပြာ အရောင်အဆင်းအား အမြဲလိုလို ၀တ်ဆင် ထားတတ်သည့် သူ့အား ကျနော်က ‘အာဋာဝကချန်မလောင်း’ ဟူ၍ ထိုင်းလူထုခေါင်းဆောင် ချန်မလောင်းနှင့် ရေနံမြေမှ အာဋာဝက သခင်ဖိုးလှကြီးအမည်နှစ်ခုအား တွဲ၍ခေါ်၏။ သူကမူ ကျေနပ်နှစ်သက်စွာနှင့် ပြုံး၍သာ နေသည်။
ထိုင်းထောင် အတွင်း သူနှင့်ကျနော် စကားများ ပြောဖြစ်ကြသည်။ ရှေ့ဟောင်း နှောင်းဖြစ်များ...။ သူတို့၏ ‘ယူနီအိုးရှင်း’ တိုက်ပွဲအကြောင်းက ကျနော်တို့ စကားဝိုင်းတွင် အချိန်များများ နေရာယူ၏။ ကျနော်ကလည်း ‘ယူနီအိုးရှင်း’ အလုပ်သမားဟောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်၍ စိတ်ဝင်စား၏။ သူတို့ဦးဆောင်ခဲ့သည့် ‘ယူနီအိုးရှင်း - ၂၀၀၅’ တိုက်ပွဲက စိတ်ဝင်စားစရာလည်း ကောင်း၏။ ပြီးလျှင်... သူတို့၏ ဦးဆောင်မှု။ အားလုံး၏ ညီညွှတ်မှု…..။ စသည့်တို့က တိုက်ပွဲအား အောင်ပွဲသို့ ချီစေခဲ့၏။ ကျနော်က...။